Isbedelka cimiladu wuxuu saameeyaa xulashada dabiiciga ah iyo isbeddelka noolaha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Nidaamyadeena deegaanka, dhammaan noolaha waxay raacaan nidaam loo yaqaan xulashada dabiiciga. Nidaamkani waa midka go'aaminaya hiddo sidaha ugu faa iidada badan noolaanshaha noolaha oo keena "hagaajinta" la qabsiga.
Isbedelka Cimilada iyo saameynta ay ku yeelatay adduunka oo dhan, waxay kaloo saameyn ku yeelan kartaa howshan xulashada dabiiciga ah, oo sababaya astaamaha kaladuwan ee isbeddelka noolaha in wax laga beddelo.
1 Waa maxay xulashada dabiiciga ah?
2 Xulashada dabiiciga ah iyo isbedelka cimilada
3 Roobabka oo yaraaday iyo abaaro soo kordhay
4 Isbedelada nidaamka deegaanka
Waa maxay xulashada dabiiciga ah?
Si buuxda loo fahmo sida isbeddelka cimilada u saameynayo xulashada dabiiciga ah, waa inaan ogaanno waxa ay ku saabsan tahay. Xulashada dabiiciga waa habka ay noocyadu ula qabsadaan deegaanadooda. Isbeddelka isbeddelka isbeddelka ayaa la hoggaamiyaa marka shakhsiyaadka leh astaamo cayiman ay leeyihiin nolol badbaadin ama taran ka sarreeya shakhsiyaadka kale ee dadweynaha oo u sii gudbiya astaamahan hidde-wadaha ee dhaxalka u ah carruurtooda.
Genotype waa koox ka mid ah noolaha oo wadaaga astaamo hidde ah oo gaar ah. Sidaa darteed, si fudud haddii loo dhigo, xulashada dabiiciga ah waa farqiga isdaba-joogga ah ee badbaadada iyo taranka u dhexeeya hiddo-wadaha kala duwan. Tani waa waxa aan ugu yeeri karno guusha taranka.
Xulashada dabiiciga ah iyo isbedelka cimilada
Daraasad lagu daabacay joornaalka Science la daabacay usbuucii la soo dhaafay waxay ku doodeysaa in isbeddelada caalamiga ah ee geeddi-socodkan xulashada dabiiciga ah ay hagayaan roobab badan heerkulka. Maaddaama isbeddelka cimilada uu wax ka beddelayo nidaamka roobka heer caalami, waxay sidoo kale saameyn kartaa geeddi-socodkan xulashada dabiiciga ah.
In kasta oo cawaaqibyada deegaanka ee isbeddelka cimilada ay si sii kordheysa loo diiwaangeliyey, saameynta ay cimilada ku leedahay geeddi-socodka isbeddelka ee hagta la-qabsiga lama yaqaan, ”ayaa lagu yiri qoraalka lagu daabacay Sayniska.
Sababtoo ah tani waa shaqo aad u adag, saynisyahannadu waa inay aadaan oo ay isticmaalaan xog ururin ballaaran oo ka dambeysa daraasadihii la sameeyay tobannaan sano ee la soo dhaafay. Xogtan waxaa ku jira daraasadaha lagu sameeyay dadyowga kala duwan ee xayawaanka, dhirta iyo noolaha kale, iyo weliba awoodda ay u leeyihiin inay noolaadaan oo ay tarmaan.
Roobabka oo yaraaday iyo abaaro soo kordhay
Mid ka mid ah doorsoomayaasha saameynta ugu badan ku yeelan kara xulashada dabiiciga waa nidaamka roobka. Haddii ay yaraadaan, abaaruhu way sii kordhayaan, waqtiga iyo soo noqnoqodka labadaba. Kadib, abaaraha oo kordhay waxay sababaan in deegaanno badan ay noqdaan kuwo qalalan oo xitaa lamadegaan ah. Si kastaba ha noqotee, meelaha kale, roobabku way sii kordhayaan waxaana laga yaabaa inay jiraan xaalado uu gobolku noqdo dhul qoyan.
Si kasta oo ay tahay, tani waxay saameyneysaa qaababka xulashada dabiiciga ah. Taasi waa, isbeddelka noocyada kala duwan ee noolaha waa la saameeyaa maxaa yeelay hiddeyaasha noocyadu ma beddelaan oo keliya, laakiin sidoo kale wakiilka dibedda (cimilada) ayaa isbeddela. Kala duwanaanta cimilada, sida kuleylka oo kordhay, nidaamyada dabaysha, roobabka, iwm. Waxay saameyn ku yeeshaan wax ka beddelka noolaha kala duwan ay ku dhici karaan natiijada xulashada dabiiciga ah.
Isbedelada nidaamka deegaanka
Nidaamka bey'ada deegaanka waxaa jiri kara isbedelo waqti dheer ah oo noocyada kaladuwan ay yeelan karaan "margin" si ay ula qabsadaan una bartaan inay ku noolaadaan wajiyada xaaladaha cusub. Tusaale ahaan, isbeddelka qaabka roobka wuxuu saameyn ku yeelan karaa ilaha cuntada ee noolaha kala duwan. Taasi waa, noocyada ku tiirsan cuntooyinka qaarkood, sida dhirta dhirta, waxaa saameyn ku yeelan kara hoos u dhaca daboolka dhirta sababtoo ah hoos u dhaca roobka.
Taasi waa sababta ogaanshaha saameynta isbeddelka cimilada iyo ogaanshaha xiriirka ay la leedahay geeddi-socodka isbeddelka ee xulashada dabiiciga ah ay muhiimad weyn u leedahay in la ogaado isbeddelka ku shaqeynaya nidaamka deegaanka. Sababtoo ah xaqiiqda ah in muddo gaaban kororka roobab culus ayaa la filayaa taas oo u horseedi karta isbeddello muhiim ah qaababka xulashada.
Sidii aan hore uga faallooday, waxay kuxirantahay xawaaraha ay isbeddelada ku dhacayaan nidaamka deegaanka, noocyada ayaa laga yaabaa ama la qabsan karin xaaladaha cusub. Si kastaba ha noqotee, waxa aan la dafiri karin ayaa ah in isbeddelka cimilada uu leeyahay awood ku filan oo uu ku beddelo la qabsiga noolayaasha adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Isbedelka cimiladu wuxuu saameeyaa xulashada dabiiciga ah iyo isbeddelka noolaha
hahaagii hore dijo
waxaa jira cawl galaya malawadka mid kale, si sax ahna sawirka ugu horeeya
Ku jawaab hahaagii hore